May 2019 - ThutaStar
Welcome From ThuTaStar
ရေသန့်ဗူးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ တင်ဒါကို သောက်မိ၍သေဆုံးသွားတဲ့ မလှိုင်းထက်နွေ ၂၀ နှစ်
May 6, 2019 Thuta Star 0
တင်ဒါသောက်မိ၍သေဆုံးသွားတဲ့ မလှိုင်းထက်နွေ ၂၀ နှစ် ဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၁၉ မေလ ၅ ရက် နေ.လည် ၁၂ နာရီအချိန်တွင် ပုသိမ်ခရိုင်ပုသိမ်မြို့နယ် ပုသိမ် မမစ မှ ဒုရဲအုပ်ယမငိးထွန်းသည် တာဝန်မှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်လူနာဠာနတွင် တင်ဒါသောက်မိ၍သေဆုံးသည့် အလောင်းတစ်လောင်းရောက်ရှိနေကြောင်းဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသဖြင့် မမစမှူး ၊သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ […]
ပြည့်တန်ဆာနဲ့ အိပ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေက မယုတ်မာဘူး တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး သူတို့လိုအပ်တာကို ဝယ်တယ်…
ပြည့်တန်ဆာ နဲ့ အိပ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေက မယုတ်မာဘူး တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး သူတို့လိုအပ်တာကို ဝယ်တယ် … ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အတူအိပ်ချင်ကြတဲ့ ယောက်ျားတွေကတော့ပိုပြီး ယုတ်မာတယ် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတဲ့အပြင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရော နှလုံးသားရော သေအောင်သတ်သွားတာမျိုးပေါ့ … အညှာလွယ်တာကိုး အယုံလွယ်တာကိုးလို့ ပစ်စလတ်ခတ်ပြောချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကရော တကယ်ချစ်ရင် ဘဝပေးပြီး သက်သေပြပါလို့ […]
ဗိုက်အဆီတွေကို အရည်ပျော်သွားသလို ချက်ချင်း ကျစေမယ့် ၅ မိနစ် လေ့ကျင့်ခန်းလေးများ
ဗိုက်အဆီတွေကို အရည်ပျော်သွားသလို ချက်ချင်း ကျစေမယ့် ၅ မိနစ် လေ့ကျင့်ခန်းလေးများ တနေ့တခြား ဗိုက်က ပူပူလာပြီး အဝတ်အစား ဝတ်ခါနီးတိုင်း စိတ်ညစ်နေရ ပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေး တွေက ပျိုမေတို့အတွက် အရမ်းကို အကျိုးရှိမှာပါ။ ဖော်ပြထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ၅ မိနစ်စီ အချိန်ပေးပြီး […]
“ဆရာတော်ကြီးများက အမေစု၏ ကံကြမ္မာကို ဖတ်ခဲ့သောနိမိတ်များ”
အမေစုကို သာမညဆရာတော်ဘုရားက- ဒကါမလေးက အဖေဗိုလ်အောင်ဆန်းထက် အသက် ၃ဆရှည်ပြီး အိုမင်းတဲ့အရွယ်မှာ သူမတူအောင် ထိပ်တန်းရောက်မယ့် ဘုရင်မ ဖြစ်မယ့် ဘုန်းကံဣဒ္ဓိပါဒ်ပါတာဘဲ ဆိုပြီးမိန့်ဘူးတယ်။ ဒါကို ဦးခင်ညွန့် တို့ကအမျိုးမျိုး နာမ်နှိမ်ခဲ့တာလို့ ကောလာဟလ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကတော့- အမေစုနဲ့ပက်သတ်ပြီး ဘေးက တစ်ကြို နိမိတ်မေးလျောက်ကြတော့ […]
စိုင်းစိုင်း ဘောင်းဘီ ဇစ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ Birthday Show ပွဲအကြောင်း ဖောက်သည်ချခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်
စိုင်းစိုင်း ဘောင်းဘီ ဇစ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ Birthday Show ပွဲအကြောင်း ဖောက်သည်ချခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ် အနုပညာ​လောကမှာ ဆယ်​စုနှစ်​တစ်​ခုမက ​အောင်​မြင်​မှု​တွေ များစွာကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ အဆို​တော်​ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်​က​တော့ ဒီ​နေ့ထိတိုင်​ နှုတ်​ခမ်းနီမ​လေး​ တွေရဲ့သဲသဲလှုပ်​ ချစ်​ခင်​အား​ပေးမှုကို ခံထားရသူ တစ်​ဦးပဲ ဖြစ်​ပါတယ် ​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ စိုင်းစိုင်းက […]
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသောလူနာကို အမြန်ကယ်ဆယ် ကုသနည်း
(၁) လေဖြတ်သောလူနာကို (မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ) ဖြစ်သော နေရာမှ ရွှေ့ပြောင်းသယ်မခြင်း မပြုရပါ။ ထိုသို့ချက်ခြင်းရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ပါက ကားဆောင့်ခြင်း အစရှိသောလှုပ်ရှားခြင်း ဒဏ် များကြောင့် ဦးနှောက် သွေးကြောငယ်များကို လျှင်မြန်စွာ ပေါက်ကွဲစေပြီး လူနာ၏ အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေ.ပြောင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။ (၂) လူနာကိုဖြစ်သည့် နေရာတွင်ပင် […]
နင်​နဲ့ငါ လင်​မယားလို​နေရ​အောင်​​ပြောပြီး ​ခြောက်​နှစ်​သမီးလေး သားမယားပြုကျင့်​ခံရ ( ရုပ်သံ )
နင်​နဲ့ငါ လင်​မယားလို​နေရ​အောင်​​ပြောပြီး ​ခြောက်​နှစ်​သမီး သားမယားပြုကျင့်​ခံရ ( ရုပ်သံ ) ​ခြောက်​နှစ်​သမီးငယ်​ကို သားမယားပြုကျင့်​ခံရသဖြင့်​ ထိ​ရောက်​စွာ အမြန်​ဆုံးအ​ရေယူ​ပေး​စေရန်​ မိဘနှစ်​ပါးကဆို စစ်​ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ​ရွှေဘိုခရိုင်​၊ တန်​ဆည်​မြို့နယ်​၊ ရွာရှည်​​တောင်​​ကျေးရွာအုပ်​စု၊ သရက်​ကုန်း​ကျေးရွာတွင်​ အသက်​(၆)နှစ်​သမီးငယ်​ ​အိမ်​​အောက်​တွင်​ အိပ်​​နေစဉ်​ တရွာတည်း​နေ ​မောင်​​အောင်​ချမ်းဦးဆိုသူ (၁၅)နှစ်​ခန့်​က ၄-၂-၂၀၁၉ ရက်​​နေ့က […]
မိန်းက​လေးများ မသိဘဲ လုပ်မိနေတဲ့ အလွန် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာမျာ..
အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ တချို့ အကျင့်တွေ ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အမှုမဲ့ ၊ အမှတ်မဲ့ ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန် အန္တရာယ် ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ဆင်ခြင် ပြုပြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. မိန်းမကိုယ်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောခြင်း လုံးဝ ဆပ်ပြာ […]
နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို လက်နဲ့ အသာအယာ ထိတွေ့ပေးတာကတော့ အချစ်စိတ်လေးတွေကို နိုးထလာစေပါတယ်..
နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို လက်နဲ့ အသာအယာ ထိတွေ့ပေးတာကတော့ အချစ်စိတ်လေးတွေကို နိုးထလာစေနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေထဲက တစ်ခုဆိုတာကို သိထားပေးပါနော်။ ကြည်နူးဖွယ် စုံတွဲလေး မင်္ဂလာပွဲလေး ပြီးဆုံးသွားလို့ ချစ်သူတွေ ဘဝကနေ အိမ်ထောင်ရယ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ အချစ်စိတ်ကို ပိုဖြစ်စေမယ့် နေရာလေးတွေကို သိထားမှ ဖြစ်မှာပါနော်။ ကိုယ့်ချစ်သူလေးဆိုတာထက် ပိုတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်နေရာလေးတွေကတော့ အချစ်စိတ်ကို […]
သင်ဇာရဲ့ အမိုက်စားဖျော်ဖြေမှုအောက်မှာ အုံအုံကြွကြွဖြစ်ရလောက်အာင် အားပေးကြမ်းခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံကပရိသတ်တွေ
ပုရိသတွေရဲ့အသည်းကျော် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ လက်ရှိမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအတွက် ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကမှ ကိုရီးယားနိုင်ငံကို အဆိုတော် ယုန်လေး၊ အဆိုတော် ဂျင်းနီတို့နဲ့အတူ ရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သင်ဇာက ကိုရီးယားသင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်ကြီးမှာတော့ သင်ဇာက ပရိသတ်တွေရဲ့အပြတ်အသတ် ဝန်းရံအားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တဲ့ မျက်နှာလေးကြောင့် […]
THUTASTAR provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://thutastar.net/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.